All Business bụ Mpaghara | Martech Zone
Heard nụrụ m nke ọma… azụmahịa niile bụ nke obodo. Anaghị m arụ ụka na azụmahịa gị nwere ike ịdọta azụmahịa mba na mba. Naanị m na-arụ ụka n'eziokwu na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbalị izere ịbụ ndị a kpọrọ as obodo - n'agbanyeghị na ọ nwere ike inyere ha aka.
Anyị na-akwado ndị ahịa anyị niile ịkwalite ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ha. Ma ọ bụ site na ngwa eserese siri ike dị ka anyị wuru maka ya Nnụnụ Anụ Unlimited, ma ọ bụ nanị na-agba ndị ahịa ume ka ha depụta nọmba ekwentị ha na adres n'okporo ámá na ibe ọ bụla nke saịtị ha dị ka anyị mere Datalọ Ọrụ Data Ndụ.
Ọ bụla azụmahịa na-agba ọsọ ebe… anyị bụ ogbe ndịda Indianapolis. Anyị họọrọ ogbe ndịda ka o nwee ntakịrị metro na ya ma ọ dị n'akụkụ isi obodo na etiti etiti azụmahịa na azụmaahịa dị na obodo Indianapolis. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụghị ebe ndị ahịa anyị nọ. Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na Europe dum, na India, na Canada na gbagoro na West na East Coasts.
Kedu ihe kpatara anyị ji akwalite adres anyị na saịtị anyị? Maka na ime ka ndi mmadu mara ebe ino bu nnuku uzo iji wulite ntụkwasị obi n’aka ha. Brandsdị a na-adịghị ahụ anya na ụlọ ọrụ ndị a na-adịghị ahụ anya na ndị ọrụ a na-adịghị ahụ anya nwere oge siri ike karị na-ewulite ntụkwasị obi na ndị na-ege ha ntị. You ga-etinye nnukwu ego na ụlọ ọrụ ị na-enweghị ike ịchọta? Agaghị m! Enwere ụfọdụ ihe akaebe na-egosi na igwe na-achọ ihe ịchọ ịmata na ị meberela onwe gị na mpaghara - ịkọwapụta saịtị ngwa ngwa mgbe ha nyere nọmba ekwentị na adreesị.
Anyị mere ihe ngosi redio SEO mpaghara Izu a ma ọ mara mma. Otu n'ime ndị na-ege anyị ntị rụtụrụ aka na nnukwu ngwa ọrụ Nweta. Anyị nwere ọrụ ị ga-arụ iji debanye aha na saịtị ndị ọzọ. Echere m na anyị ga-agafe Web kacha mma - mana m ga-edebanye aha ndị ọzọ. E depụtara gị?
Mara: Onye na - agụ akwụkwọ ọzọ dere iji gwa anyị maka ya Ndepụta Azụmaahịa Universal (Mgbakwunye njikọ), ọrụ na-ahụ maka azụmaahịa gị edenyere aha na ndekọ ndekọ ọnọdụ ọ bụla. Ọ bụrụ na enweghị ike ịchọta azụmahịa gị na mpaghara, ị nwere ike ịnwe nsogbu ịchọta na mba na mba!
Tags: chris akpaakwụkwọ ahịa emailigosi ihe ngosimoviesonye njikwa obere akpayahoo